Apple dia namoaka ny beta fahafito an'ny iOS 14.5, iPadOS 14.5, HomePod 14.5, tvOS 14.5 | Vaovao IPhone
Vaovao farany momba ny rafitra fiasan'ny Apple hita ao amin'ny 14.5 version Nambaran'izy ireo fa iray amin'ireo fanavaozana lehibe indrindra izy ireo. Hatramin'ny beta voalohany ho an'ny mpamorona dia fantatray fa ity fanavaozana ity dia ho zava-dehibe amin'ny tontolo iainana manontolo. Tafiditra ao anatin'izany ny vaovao momba ny feon'i Siri, ny fahaizana mamoha ny iPhone amin'ny Apple Watch, ny Apple Fitness + mifanentana amin'ny AirPlay 2, ny fanovana ny serivisy playback misy anao ary maro hafa. Raha ny tena izy, ny fahatongavan'ny beta fahafito an'ny iOS 14.5, iPadOS 14.5, fiambenanaOS 7.4, HomePod 14.5 ary tvOS 14.5 mampiseho fa efa ho tonga amin'ny mpampiasa rehetra ny kinova farany.
Beta fahafito amin'ny fanavaozana lehibe ho avy ho an'ny fitaovana Apple
Nandritra ny ora vitsivitsy dia Beta faha-XNUMX ho an'ny mpamorona ny fanavaozana ny rafitra fandidiana Apple ho avy. Mba hametrahana azy ireo dia tsy maintsy manana mombamomba ny mpamorona napetraka ao amin'ny fitaovanao ianao ary afaka miditra amin'ilay fanavaozana amin'ny alàlan'ny Ivotoerana developer ao amin'ny tranokala ofisialin'i Apple.
iOS 14.5 sy iPadOS 14.5 Mampahafantatra endrika vaovao maro izay noresahinay tao amin'ny iPhone News izy ireo tato anatin'ny volana vitsivitsy. Io ilay fanavaozana izay mametraka ny fiovan'ny paradigma ao amin'ny app 'Search' miaraka amin'ny fitaovan'ny antoko fahatelo. Ny fahafaha mamoha ny iPhone amin'ny Apple Watch na manova ny feon'i Siri dia natolotra ihany koa. Tsy isalasalana fa ny kinova 14.5 dia mitondra fiasa vaovao maro hamakafaka.
Raha ny amin'ny tvOS 14.5 sy HomePod 14.5 Ny fampifanarahana dia tafiditra ao amin'ny fanaraha-maso Xbox Series X sy Playstation 5. Ahitana fanovana endrika manodidina ny 'Siri Remote' izay antsoina ankehitriny hoe 'Apple TV Remote' ary ny 'Home' mankany 'TV'. Ny rafitra fiasan'ny HomePod dia mifototra amin'ny tvOS, noho izany ny fiasa vaovao dia misy fanovana ny feo Siri, ankoatry ny hafa.
Ary farany, watchOS 7.4 dia ahitana ny famohana ny iPhone amin'ny iOS 14.5, ny fanitarana ny fampiasa EKG ary ny fahatongavan'ny 'Time to Walk' ho an'ny mpampiasa Fitness +. Raha tsy misy fisalasalana, afaka manitatra amin'ny vaovao momba ny rafitra miasa tsirairay isika, fa ny tena zava-dehibe dia ny fahatongavan'ireo betas fahafito amin'ireto rafitra ireto izay mety hahitana fiasa bebe kokoa sy vaovao ho an'ny kinova farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Apple dia namoaka ny beta fahafito an'ny iOS 14.5, iPadOS 14.5, watchOS 7.4, HomePod 14.5 ary tvOS 14.5
Podcast 12x25: nanao veloma ny Facebook ny bundle volontsôkôlà sy ny LG